R.W Khaire: Waxaa la dagaalanka Covid-19 kala hadlay wasiirka A.D Norway. - NorSom News
R.W Khaire: Waxaa la dagaalanka Covid-19 kala hadlay wasiirka A.D Norway.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo wasiirka arrimaha dibadda Norway, Ine Eriksen Soreide ayaa maanta yeeshay kulan dhanka internet-ka ah (video conference). Waxeyna labada masuul sheegeen inay ka wada hadleen xoojinta xariirka labada dal, dadaallada lagu xakameynayo COVID-19 iyo arrima kale.
Ra’iisul Wasaaraha Jahuuriyadda oo dowladda Norwey uga mahad celiyay taageerada hanaanka deyn cafinta Soomaaliya iyo gaaritaanka Barta Go’aanka (decision Point).
Previous articleFarmashiiste Kassim: Talaabooyinkan samee marka aad farmashiyaha kasoo adeeganeysid.
Next articleCaro xoogan oo laga muujiyay qaabka ay siyaasiyiinta soomaalida uga hadleen kiiska soomaalida iyo xanuunka Covid-19.